အားလုံးဘတ်တဲ့ တီချမ်း: ကြည်လဲ့လဲ့ဦး တုတ်ထိုး
တုတ်ထိုးမှာ အရေးကြီး တာ အချဉ်ပါ ပရိတ်သတ်ကြီးတွေလဲ အကုန် သဘောတူကြမယ် မျှော်လင့်ပါတယ် မတူလဲ မရဘူးလေ တီ့ စာလာဘတ်နေတာပဲကိုးနော်.....အဲ့တာကြောင့် အရေးအလွန်အင်မတန်မှကြီးတဲ့ အချဉ် ဖျော်နည်း ကို ဦးစွာပထမ ပြုကာပြရရင်တော့....
ဒါကတော့ မနက်ကတည်းက ချွေးတလုံးလုံး နဲ့ တီတို့စားဖို့အရေး ချက်ပြုတ် ပြင်ဆင်နေတဲ့ ဆရာမကြီး ကြည်လဲ့လဲ့ဦးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဟုတ်ကဲ့ ......ပရိတ်သတ်များ လက်ခုပ်တီးပေးပါ။
ဒါကတော့ စကော့ဈေးကုန်းတံတားအောက်က တုတ်ထိုး ကိုလွမ်းလို့ တီချမ်းဘာသာ လုပ်ချလိုက်တဲ့ ကြာဇံ ဝက်သား တပွဲပေါ့အေ။ စားကြပါအုံး ပရိတ်သတ်ကြီးတို့ရေ...........ကြည်လဲ့လဲ့ဦး လက်ရာ တုတ်ထိုး။
Posted by တီချမ်း at 6:24 PM
Labels: တီချမ်း ဟင်းချက်ခြင်း, တုတ်ထိုး, ကြာဇံ, အသုပ်များ
Ko Boyz July 9, 2011 at 1:20 AM
ပညာမှာ တီချမ်း လို့ တော့ တစ်ခါမှ ကြားဖူးပေါင်။
တီချမ်း July 9, 2011 at 1:32 AM
ခုကြားဘူးပီလေ ကိုဘွိုက်ဇ် ရဲ့
ပညာရှာ ရာမှာ နောက်ကျတယ် မရှိဘူးတဲ့
Evy July 9, 2011 at 8:46 AM
အချဉ်ကိုများ ရက်ရက်စက်စက်နာမည်ပေးထားတယ်။ :D :D
ပထမတော. ကြည်လဲ.လဲ.ဦးတုတ်ထိုးဆိုတာ အဲဒီမင်းသမီးက မတရားဝနေလို. သူ.ကိုဝက်လို.ပြောတာလားလို. ဟီးဟီး.. ဖတ်ရင်းနဲ.မှသိတာက လုပ်တဲ.သူနာမည်ကို..
အရင်တုန်းက တီချမ်းကိုကြည်.တာချောပါတယ်လို.။ အခုတီချမ်းပုံကတမျိုးဖြစ်နေတာ အောက်မေ.တယ် ဘယ်ဟုတ်မလဲ ကြည်လဲ.လဲ.ဦးဖြစ်နေတာကို စော်ရီးနော် ဟဲဟဲ
MOUTH-WATERING ........ POST.............!
Wanna to eat!
T Chan yae u cho ka inside ko ma say ya bu lar
Kyaw Hnin Se Lwin July 9, 2011 at 3:33 PM
တီချမ်းကလဲ တခါတခါချက်ရင်နည်းဘူးပဲ သူများသားရေယိုအောင် ：（（
Thank you for this food and post.
တီချမ်း July 9, 2011 at 6:29 PM
အပေါ်က အနောနိမတ်စ် ရေ
အူချိုက အထဲ မဆေးရပါဘူး ဘယ့်နှယ့် အူပွ တို့ အူမ တို့ပဲ ဆေးရတာ အူချို က အထဲဆေးရင် ထွက်ကုန်မှာပေါ့ ကောင်းတာလေးတွေ
သူများက အခု ကို လင်နဲ့ကုတင်နဲ့ဖြစ်နေပြီ
နွေးနေခြည် July 9, 2011 at 6:39 PM
တီရေးလိုက်ရင်တော့ ရှင်းလင်းတိကျနေတာပဲ။ ကြိုက်တယ်။ အချဉ်နာမည်လည်း သေချာမှတ်သွားတယ်။း)
Anonymous July 9, 2011 at 7:30 PM
ချက်နည်းပေးလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ 
mite tel kwar:)
Snow July 10, 2011 at 12:58 AM
တုတ်ထိုး၊ အချဉ်နဲ့ သခွားသီးက အရမ်းကောင်းလို့ ခုထိ ထပ်စားချင်နေတုန်းပဲ။
KNL ကိုရော၊ အိမ်ရှင်ကြီးကိုပါ ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။
khin oo may July 10, 2011 at 2:07 AM
khin oo may July 10, 2011 at 2:08 AM
ချစ်ကြည်အေး July 10, 2011 at 10:10 AM
ဖတ်ရင်းနဲ့ တံတွေး မြိုချနေရတာအေ...၊ ဒါနဲ့ ဝက်သားတုတ်ထိုးထဲ ထန်းညက်လေး နဲနဲ ထည့်ပြုတ်ရတယ် ကြားဖူးတယ်၊ ကြည်လဲ့လဲ့ဦးကို မေးပေးပါဦး ပြင်ညာယှိတီချမ်း "စုံပလုံစိပွမ်မ"ရယ်.....
T-chan yay....R Bwar, Mwa Mwa Mwa...chit pho kg tal, you and KLLO.
I am waiting for so long this post.
SHWE ZIN U July 10, 2011 at 9:11 PM
အောက်ဆုံး က ပွဲလေး ဆွဲသွားပြီ တီချမ်းရေ
warrrrrrrrrr! wanna eat.
တုတ်ထိုးဆိုပြီး တုတ်လဲတချောင်းမှမတွေ့ဘူး .. :D
စံပယ်ပန်း July 13, 2011 at 12:37 AM
ဟား ဟား ရယ်လိုက်ရတာ တီချမ်းရယ်..။ တီချမ်းက တော်တော်စာရေးတတ်တာပဲ..။ ဒီပို့စ်လေးဝင်ဖတ်ရင်းကနေ တီချမ်းကိုဘယ်သူလဲသိအောင်ဆက်ဖတ်ရင်း ရယ်လိုက်ရတာ..။ ဟား ဟား..။ မနေနိုင်လို့ သူငယ်ချင်းတွေပါ ဖုန်းဆက်ပြောလိုက်ရသေးတယ်..။ တီချမ်း တော်တော်ရေးနိုင်တာပဲ..။ ချက်လည်းချက်နိုင်.. တင်လည်းတင်နိုင်တယ်နော်..။ ကောင်းလိုက်တာ..။
umm TChan, you look chubby.. take care your weight... don't chubby more.. it will not look sexy. :P
I am sorry I didn't read properly.. it's not you .. it's Kyi Le Le Oo :))
David Aye Myat August 5, 2011 at 8:53 AM
Ha Ha Ha Ha.. I clicked LIKE to the above two comments.
thanks for clicking LIKE my comments. :X